Home Wararka DEG GEG:Putland oo Weerartay Ciidamo katirsan Somaliland
DEG GEG:Putland oo Weerartay Ciidamo katirsan Somaliland
Maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeeen in ay xalay Weerar ku qaadeen Saldhigyo ciidamada Somaliland ay ku leeyihiin Magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.
Gudoomiyaha Gobolka Sool ee Puntland Abuubakar Cabdi Geele ayaa sheegay in Ciidamo ka tirsan Puntland ay Xalay weerar ku qaaadeen 2 Saldhig oo ku yaala Magaalada laascaanood.
Geele ayaa sheegay in weerarkaasi oo Saaka Subaxnimadii hore soo gaaray ay Ciidamadu ku guuleysteen in Xabsiyada ka siidaayeen Maxaabiis u xirnaa Somaliland.
Waxaa uu sidoo kale Shacabka gobolka Sool ugu baaqay in ay taageeraan Puntland,islamarkaana ay ka qeyb qaataan howlgallada ka dhanka ah Somaliland.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka Somaliland oo ku aadan hadalkaan kasoo baxay maamulka Puntland.
Previous articleAqriso:Xildhaano Wado Mooshin ka dhan ah Hishiiskii Farmaao uu lagalay Itoobiya oo Muqdisho sharar ku leh
Next articleMaamulada Galmudug iyo Putland oo war ka soo saaray Xaalada Magaalada Gaalkacyo
Askari Dilay Bajaajle Oo Maanta Xukun Lagu Riday
Banaanbax ka dhan Ciidamada Kenya oo ka Socdo Baardheere (Aqriso)